ပါဝါမျက်မှန် အနီးကြည့်နဲ့ အဝေးကြည့်တပ်ရသူ ဘယ်သူက ဉာဏ်ရည်သာလဲ..? by popolay.com
စိတ်ညစ်နေတဲ့ မိခင်က ၂ နှစ်သမီးလေးကို ၉ ထပ်တိုက်ပေါ်မှ လွှင့်ပစ်ချ
Tik Tok မှာကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ သာယာကြည်နူးနေတဲ့ သင်းသင်း
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ခုံနံပါတ်မှာ ကျော်ကျော်နန္ဒရဲ့ ဖိတ်စာဖြစ်နေ
ခေတ်ဟောင်းက သင်္ကြန်အငွေ့အသက်ပုံရိပ်တွေ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ ကျော်ထက်အောင်ရဲ့ သင်္ကြန်သီချင်း
အကယ်ဒမီ ဆန်ကာတင်မှာ (၆) ကားတိတိပါဝင်တဲ့ဖွေးဖွေး
လီဗာပူးအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားရတာကို ကြည်ရူနိုင်စွမ်း မရှိဘူးဆိုတဲ့ ရွန်းနီ
ဆာလာရဲ့ ပြောင်းရွေ့ ကြေးကို မပေးချေတဲ့ ကာဒစ်အသင်းကို ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ဆာလာရဲ့ မိခင်
အသင်းအနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် အမှားသင့်တဲ့အမှားကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ ဂိုးသမား ကော်တိုရစ်
ဘက်တစ်နဲ့ပွဲမှာသွင်းခဲ့တဲ့ မက်စီရဲ့ သွင်းဂိုးပုံစံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်က လမ်းပတ်သွင်းခဲ့ဖူးပါတယ်
ပါဝါမျက်မှန် အနီးကြည့်နဲ့ အဝေးကြည့်တပ်ရသူ ဘယ်သူက ဉာဏ်ရည်သာလဲ..?
16 Jul 2018 5,455 Views
မျက်ဝန်းနှစ်ဆ ရှိသူများ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း အသိပညာ ဉာဏ်ရည်မှာလည်း နှစ်ဆသာကြောင်း သုတေသနပညာရှင်များက စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဉာဏ်ရည်သာသူအများစုမှာ ပါဝါမျက်မှန်တပ်သူများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စကော့တလန်နိုင်ငံ အီဒင်ဘရာ့ခ်ျတက္ကသိုလ် (Edinburgh University) မှ သုတေသနပညာရှင်များက အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၀၂ နှစ်ထိ အရွယ်စုံ ဥရောပနွယ်ဖွား လူပေါင်း ၃၀၀,၄၈၆ ကို မှတ်ဉာဏ်၊ ဘာသာစကားစွမ်းရည်၊ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ အာရုံစိုက်မှု တို့ကို အခြေခံထားသည့် အတွေးခေါ်ဉာဏ်ရည်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှုရလာဒ်များအရ အမြင့်ဆုံးအမှတ် ရရှိသူအများစုမှာ ပါဝါမျက်မှန်တပ်ဆင်ရသူများ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သို့သော် ပါဝါမျက်မှန်တပ်သူအားလုံးဟာ အမြင့်ဆုံး ရလာဒ်ရရှိသူကြများမဟုတ်ပဲ အဝေးမှုန် (အဝေးကြည့်ပါဝါ)တပ်ဆင်သူများကသာ ရမှတ်မြင့်ပြီး အတွေးအခေါ် သာလွန်သူများဖြစ်ကာ အနီးကြည့်ပါဝါတပ်သူများက ရလာဒ်အမှတ် နိမ့်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ပါဝါမျက်မှန်တပ်ဆင်ရတာနဲ့ ဉာဏ်ရည်ဘာကြောင့် သာနေရတာလဲဆိုတဲ့ ပိုမိုတိကျသည့် အဖြေတစ်ခုကို ပေးနိုင်ဖို့ ပညာရှင်များအနေနဲ့ ဆက်လက်ရှာဖွေစူးစမ်းကြဖို့ လိုနေပါသေးတယ်။
သမီးတွေကို ပြောပြပေးပါ၊ အစ်ကိုရင်းဆိုတာလည်း ယောက်ျားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ